Wareysi muhiim ah oo aan ka helnay Laanta Socdaalka Sweden | Somaliska
Waxaa inoo suurto gashay in aan wareysi ka helno La taliyaha xaga Sharciga ugu sareeya Laanta Socdaalka Mikael Ribbenvik, wareysigaan ayaan waxaan wax ka waydiinay in Laanta Socdaalka ay noo faahfaahiso dhibaatada soo wajahday Soomaalida dooneysa in ay reerkooda keensadaan Sweden iyo wixii xal ah. Hadaba wareysiga ayaa sidaan u dhacay. Jimcale: Waxaan ognahay caruurbadan oo waalidkood loo diiday in lala mideeyo, waa maxay aragtida Laanta Socdaalka ee dhibaatadaas? Laanta Socdaalka: Waxaan raacnaa qaanuunka u degsan Sweden ee dhinaca baasaboorka iyo go'aankii ay gaartay Maxkamada Sare ee Socdaalka. Baasaboorka loo yaqaan feremlinka lama siiyo qof wadankiisii jooga ama qof Sweden banaanka ka jooga, ilaa qofku in uu la yimaado cadeyn sharci ah ma ahane. Dhibaatadu waxay ka taagantahay cadeynka aqoonsiga dadka Somalida. Laanta Socdaalku waxay ku tala jirtaa in dib loo qiimeeyo arinta cadeynka aqoonsiga ayadoo tixgalin gaar ah la siin doono la mideynta caruurta waalidkooda. Jimcale: Waan la socdaa in shuruuda baasaboorka uu ka yimid maxkamada Sare, balse arintaan sharci ahaanteeda waa sidee in waalid loo diido in caruurtooda lala mideeyo? Laanta Socdaalka: Marka laga tago tixgalinta aan siino qaxootiga, ma jiro sharci caalami ah [caption id="attachment_889" align="alignright" width="75" caption="Mikael Ribbenvik"] [/caption] ama mid gaar ah oo qasab kaga dhigaya Sweden in ay baasaboor siiso dadka ajanabiga ah ama u diidaya Sweden in ay qasab kaga dhigto dadka oo dhan in ay baasaboor keensadaan. Sida caadiga ah waa shuruud u dhaxeysa xiriirka u dhexeeya wadama in wadankasta uu baasaboor ka dalbado dadka wadamada kale ama in uu iska dhaafo balse dhibaatada ayaa ah in Soomaaliya aysan jirin cid heshiis nuucaas ah lala galo sidaa darteedna baasaboor Soomaali ah lama aqbali karo. Jimcale: Waa sidee rajada in Maxkamadu ka laabato go'aankeedii ama wado kale loo helo oo reeraha Soomaalida lagu mideeyo? Laanta Socdaalka: Waa macquul in Maxkamada Sare ee Socdaalku ay Soomaalida si qaas ah shuruuda uga qaado, balse ma qiyaasi karno taasi in ay dhacayso iyo in kale. Runtii sharciga baasaboorka fremlinka waa arin siyaasadeed, taasoo uu go'aankeeda leeyahay baarlamaanka Sweden (Riksdag). Jimcale: Waa maxay sababta ay safaaradaha Sweden ee ku yaala Afrika ay uga dalbanayaan dadka Soomaalida in ay baasaboor keenaan anagoo og in Laanta Socdaalku aysan aqbalin baasaboor Soomaali ah? Laanta Socdaalka: Baasaboorka Soomaaliga looma aqoonsana dukument lagu safri karo balse wuxuu qayb ka qaadan karaa nidaamka aan u isticmaalno in aan ku cadeyn aqoonsiga qofka. Baasaboorka kaliya cadeyn ma noqonayo balse markii lagu daro cadeymo kale iyo wixii warqado ah ee uu qofku keeno waxaa loo isticmaali karaa in la isku dayo in ay qofka cadeyn u noqon karaan. Jimcale: Goordhoweyd ayaa wasiirka Socdaalka uu sheegay in ay dib u eegayaan xaalada midnimada reeraha Soomaalida, intaad ogtahay, arintaas malagu dhaqaaqay? Laanta Socdaalka: Maya, wali Jimcale: Haddaan u soo labaano dadka wadanka jooga ee sharciga aan lahayn, waxaa na soo gaaraya dadka badan oo diidmo la siiyay ama waqti dheer laga aamusay. Laanta Socdaalku miyay badashay aragtideedii ku wajahneyd xaalada Soomaaliya, qaasatan Muqdisho? Laanta Socdaalka: Maya, ma aanan badalin aragtideenii ku aadanayd xaalada Muqdisho, balse waxaa laga yaabaa in ay waqti dheer qaadanayso waayo hada waxaa jira dad fara badan oo wadamo kale ka yimid oo Sweden iska dhiiba. Sidoo kale waa in aan xaqiijinaa goobta Soomaaliya ka mid ah ee qofka uu ka yimid. Jimcale: Ugu dambeyntii, sideed ula dhaqantaan dadka ka yimid Giriiga ama Talyaaniga oo aan ognahay xaalada nolosha qaxootiga in ay liidato? Laanta Socdaalka: Waqtiga hada la joogo, waan joojinay in aan dadka ku celino wadanka Giriiga. Hadaba wareysigeenii sidaas ayuu u dhacay, waxaan rajeynayaa in aad ka hesheen jawaabo aad sugeyseen.
Wareysi muhiim ah oo aan ka helnay Laanta Socdaalka Sweden
Waxaa inoo suurto gashay in aan wareysi ka helno La taliyaha xaga Sharciga ugu sareeya Laanta Socdaalka Mikael Ribbenvik, wareysigaan ayaan waxaan wax ka waydiinay in Laanta Socdaalka ay noo faahfaahiso dhibaatada soo wajahday Soomaalida dooneysa in ay reerkooda keensadaan Sweden iyo wixii xal ah. Hadaba wareysiga ayaa sidaan u dhacay.
Jimcale: Waxaan ognahay caruurbadan oo waalidkood loo diiday in lala mideeyo, waa maxay aragtida Laanta Socdaalka ee dhibaatadaas?
Laanta Socdaalka: Waxaan raacnaa qaanuunka u degsan Sweden ee dhinaca baasaboorka iyo go’aankii ay gaartay Maxkamada Sare ee Socdaalka. Baasaboorka loo yaqaan feremlinka lama siiyo qof wadankiisii jooga ama qof Sweden banaanka ka jooga, ilaa qofku in uu la yimaado cadeyn sharci ah ma ahane. Dhibaatadu waxay ka taagantahay cadeynka aqoonsiga dadka Somalida. Laanta Socdaalku waxay ku tala jirtaa in dib loo qiimeeyo arinta cadeynka aqoonsiga ayadoo tixgalin gaar ah la siin doono la mideynta caruurta waalidkooda.
Jimcale: Waan la socdaa in shuruuda baasaboorka uu ka yimid maxkamada Sare, balse arintaan sharci ahaanteeda waa sidee in waalid loo diido in caruurtooda lala mideeyo?
Laanta Socdaalka: Marka laga tago tixgalinta aan siino qaxootiga, ma jiro sharci caalami ah
ama mid gaar ah oo qasab kaga dhigaya Sweden in ay baasaboor siiso dadka ajanabiga ah ama u diidaya Sweden in ay qasab kaga dhigto dadka oo dhan in ay baasaboor keensadaan. Sida caadiga ah waa shuruud u dhaxeysa xiriirka u dhexeeya wadama in wadankasta uu baasaboor ka dalbado dadka wadamada kale ama in uu iska dhaafo balse dhibaatada ayaa ah in Soomaaliya aysan jirin cid heshiis nuucaas ah lala galo sidaa darteedna baasaboor Soomaali ah lama aqbali karo.
Jimcale: Waa sidee rajada in Maxkamadu ka laabato go’aankeedii ama wado kale loo helo oo reeraha Soomaalida lagu mideeyo?
Laanta Socdaalka: Waa macquul in Maxkamada Sare ee Socdaalku ay Soomaalida si qaas ah shuruuda uga qaado, balse ma qiyaasi karno taasi in ay dhacayso iyo in kale. Runtii sharciga baasaboorka fremlinka waa arin siyaasadeed, taasoo uu go’aankeeda leeyahay baarlamaanka Sweden (Riksdag).
Jimcale: Waa maxay sababta ay safaaradaha Sweden ee ku yaala Afrika ay uga dalbanayaan dadka Soomaalida in ay baasaboor keenaan anagoo og in Laanta Socdaalku aysan aqbalin baasaboor Soomaali ah?
Laanta Socdaalka: Baasaboorka Soomaaliga looma aqoonsana dukument lagu safri karo balse wuxuu qayb ka qaadan karaa nidaamka aan u isticmaalno in aan ku cadeyn aqoonsiga qofka. Baasaboorka kaliya cadeyn ma noqonayo balse markii lagu daro cadeymo kale iyo wixii warqado ah ee uu qofku keeno waxaa loo isticmaali karaa in la isku dayo in ay qofka cadeyn u noqon karaan.
Jimcale: Goordhoweyd ayaa wasiirka Socdaalka uu sheegay in ay dib u eegayaan xaalada midnimada reeraha Soomaalida, intaad ogtahay, arintaas malagu dhaqaaqay?
Laanta Socdaalka: Maya, wali
Jimcale: Haddaan u soo labaano dadka wadanka jooga ee sharciga aan lahayn, waxaa na soo gaaraya dadka badan oo diidmo la siiyay ama waqti dheer laga aamusay. Laanta Socdaalku miyay badashay aragtideedii ku wajahneyd xaalada Soomaaliya, qaasatan Muqdisho?
Laanta Socdaalka: Maya, ma aanan badalin aragtideenii ku aadanayd xaalada Muqdisho, balse waxaa laga yaabaa in ay waqti dheer qaadanayso waayo hada waxaa jira dad fara badan oo wadamo kale ka yimid oo Sweden iska dhiiba. Sidoo kale waa in aan xaqiijinaa goobta Soomaaliya ka mid ah ee qofka uu ka yimid.
Jimcale: Ugu dambeyntii, sideed ula dhaqantaan dadka ka yimid Giriiga ama Talyaaniga oo aan ognahay xaalada nolosha qaxootiga in ay liidato?
Laanta Socdaalka: Waqtiga hada la joogo, waan joojinay in aan dadka ku celino wadanka Giriiga.
Hadaba wareysigeenii sidaas ayuu u dhacay, waxaan rajeynayaa in aad ka hesheen jawaabo aad sugeyseen.
Ok waa salamantihiin bahda somaliska waxan ahay wiil somaliyeed ku nool dalka knya su asheydu waxa ay tahay
(1)safardaaha swdn ka waxay dhaheen waxaa idinka rabnaa cadeyn somali ah ex: qofkii dhashay 1980 maxaa laga rabi karaa?
(2)Tan xigta waxay tahay somaliya waxay lahatay labo bass bort key aqon sanyihiin iyga bye sory markan dhameyay qoralka ayan arkay TOPIC ga lakin jawab ayan idinka odnayaa???????
Walaal Sweden ma aqoonsana baasaboor Soomaali ah oo la bixiyay 1991 ka dib. Sidaa darteed baasaboorada Soomaalida ee safaaradaha ay bixiyaan iyo kuwa cabduleshideeye lagu sameeyo Sweden ma aqoonsana mana jiro qaabkale oo aad aqoonsigaaga ku cadeyn kartid. Waxa kaliya ee la sugayo waa in Sweden ay ka noqoto goaankooda ah in Somalida ay baasaboor keenaan.
salan wipka somaliska says:
salan ka dib waxan ahay hooyo somaliyed kuna nool addis ababa .waxan is waydinaya caruurta iyo aabayashod in lala mideyo maxa keni kara in laga rajio dacwadoda ima waxyabo kale laga dalbado o an mesha ku jirin ex .warqad meher ah ? e carur ba na dhex yale warqada 80tandi la sameyay maxe uga baahan yihin?
Abdifetah moh'ed shanle says:
December 9, 2010 at 19:37
Ok wan ku slmay jimcale runti arrintan buuqa badan katagan yahay wax xallinkara maxkamad s ee dlka sweden ok everythink insha allah ok by
Salaan kadib arintaan waxey aad u saamaneesay Somalida.
Sweden cunug 1/2 bill jiro baasabooor sanadki cali yusuf dhacay ineey u dirto waxaan u arkaaa sac caana diidi rabo maqarka aw mela dulela kadayaa, Arinta marki hore waxey go,anka ku qadten Rikis,wixi is dhalay in DNA leskaga qaado wixi aan ilmo isku laheyna an la keenin doonin ilaa la helo shuruudahan soo socdo,inaw daganyahay wadanka 4 år inow shaqeyo, 3 inow guri aw ku qoran yahay degen yahay iwm lkn tan ilmaha go,anka Dlwd waaa iskga soo qaadten maahe waxa 15/ april dhaqan galay meheyn any way wa uun culees heeysto Somalida mel walbey jogan Rabbi ayaa u sheeganay arimaheyna. Vi hoppas en dag att kunna leva tillsammans
walaalo jimcaale wax war cusub iyo wax rajo ah in xaasaska iyo caruuraha lays ku soo kaxaynayo jawaab ayaan kaa sugayaa
asc salaan kadib walaal waxaan ku wey dinayaa su aal ah madaama la diiday basaboorada somaaliya ee danbe cadeen maka dhigan karnaa walidkeen teesere uu lahaa ama leesika walidkeen ama dukumintiyo kale oo sharci ah oo waqtigii doowladii maxamad siyaad eey jirtay la ansaxiyay madama an nahay dhalinyaradii dowlada ka danbesay
Walaal waxkasta waa iska macquul oo waad tijaabin kartaan balse ma filaayo intaas ay cadeyn noqon karto waayo waxay dhibaatada ka imaaneysaa cadeynta in adiga iyo waalidkaa aad isleedihiin marka hore. hada maxkamada way u fadhidaa arintaan oo waxay u badantahay in ay isbedel sameyn doonaan. haddii alle idmo
ashur yusf says:
jimcaale maxaa lafi layaa na tii jo dad
malaga yabaa in wax laga badalo waxa soc da hada
shar ci ga swden so sar tay maa fakar wanaag san
waxay ila ta hay in la helayo is badan
wanaag san oo wax bada li kara¨
in sh alaah
walaal waan na isiaalamay salaan ka dib
waxaan jeclahayu inaa iigaga soo jawaabtaan su’aashaan walaal
sweden ayaan wax ka amaray waxaa la igu yirir soomaaalinamadaada soo cadee
waraqada cadeema ah ayaan nairobi ka sameeyay
hadana warqa kale ayeey ii soo direen
waxee igu dhaheen waan aqbalanay soomaalinimadaad waxaan kaa rabnaa waraqad cadeeneesa ninka adi kuqabo inaa waraqad ku soo cadeeso inuu ninkaas masuuliyada ilmaha ku wareejineesid saaacadaas kadib uu soo qaadan karo adiga iyoo ilmahaaga
taas waxaana u sababa ninka aniga ilmaha umadhalin
marka waxaan rabaa in la iga soo jaahil bixiyo rajadeyda sida ay tahay…..
waanaka kumahadsantihiin wlaalayaal
Faadumo: Walaal wareysigaan waqti hore ayuu ahaa marka isbedalo ayaa ka dambeeyay. Inta aan ognahay hada maxkamada hawsha soomaalida way u fadhidaa oo jawaab ayaa laga sugayaa waloow aysan goaan qaadan. arintaada haddan u soo laabto runtii jawaabta waa adagtahay balse haddii aad caruurta isku dhasheen dhiig ayay inka qaadi karaan si ay u cadeeyaan taas arinta dhiiga sida aan maqlay qeyb weyn ayay ka ahaan doontaa goaanka cusub, haddii iinan isku dhalin ilmaha runtii taas waa adagtahay rajadana kama warbixin karo.
Ashur: Rajada waa fiicantahay balse wali goaan lama gaarin, waa hawl dowladeed marka si deg deg ah kuma dhamaado balse beryahaan dambe xitaa waxaa na soo gaaray in ay dadka siiyaan ogolaansho balse caqabada ay ka taagantahay baasaboorkii ay ku soo bixi lahaayeen taasina waa arinta maxkamada laga sugayo.
walaal jimcaale marka hore waan ku salaamay marka xiga waxaan ahay aabo soomaaliyeed oo jooga wadanka sweden runtii markii la sameeyay webka soliska.com niyadeyda waxbadan ayaa iska bedelay markasta waxaan akhrista somaliska.com anigoo ku faraxsan dadaalka aad noo muujiseen inaad nagala qeeyb qaatadaan dhibka naga heysto maqnaashaha ilmaheena taasoo markasta aad garaacdaan iridkasta ee na rajo galineyso.waa mahadsantihiin hadaad tihiin somaliska.com
wax kasta ilaah ayaa og waxaan jecelnahay inaan helno dhawaan hadii ale idmo jawaab umada soomaliyeed oo dhan ay ku farxaan taas oo aan filaayo inaan noqono dad reerahooda la midoobaan waan u samraynaa insha alaah niyada khyr aan u sheegno dhamaanteen